Afaka manome serivisy namboarina tamin'ny pulley Mc nylon avo lenta amin'ny fanao isan-karazany sy ny fepetra arak'izay takiana.
mc nylon pulley dia maivana ary mora apetraka amin'ny toerana avo. Amin'ny maha-fitaovana crane tower azy, ny pulley nylon dia niparitaka be tamin'ny fitaovana fananganana isan-karazany, nanolo tsikelikely ny pulley vy tamin'ny tombony miavaka ananany. Tanjon'ny fitaovana
manome serivisy namboarina amin'ny pulley nilona avo lenta avo lenta amin'ny fomba sy fika isan-karazany arak'izay takiana
Ny pulley nylon dia manana tombony amin'ny lanja maivana sy fanoherana ny harafesina, ary afaka miaro sy manitatra ny androm-piainan'ny tariby vy ary manitatra ny androm-piainan'ny pulleys.
Ny pulley mc nylon ho toy ny crane tower dia nampiasaina betsaka tamin'ny fitaovana fananganana isan-karazany, nanolo tsikelikely ny pulley metaly tamin'ny tombony manokana. Ny pulley nylon dia afaka mitana andraikitra manalefaka tena amin'ny tanjona fanoloana vy amin'ny plastika
Azontsika atao ny manome serivisy namboarina amin'ny crane nylon crane avo lenta amin'ny fomba isan-karazany sy ny masontsivana araka izay takiana
Ny pulleys nilonaly dia mavesatra lanja ary mora apetraka amin'ny toerana avo. Ny pulley nylon crane dia be mpampiasa tamin'ny fitaovana fananganana isan-karazany toy ny ampahan'ny crane tower, nanolo tsikelikely ny pulley vy taloha tamin'ny tombony manokana ananany. Ny nilon pulley dia afaka milalao karazana fitaovana amin'ny fanoloana vy amin'ny plastika